Interpol ayaa sheegtay in ayna shaqo ku laheyn codsiga Iran ee lagu soo xirayo Trump… – Hagaag.com
Interpol ayaa sheegtay in ayna shaqo ku laheyn codsiga Iran ee lagu soo xirayo Trump…
Posted on 30 Juunyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Sarkaal ka tirsan hay’adda Interpol ayaa ka hadlay amarka lagu soo xireyo Donald Trump ee ka soo baxay Iran Isniintii, iyagoo ku eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii Jeneral Qassem Soleimani ee ka dhacay Baghdad 6 bilood ka hor.
Sarkaal ka tirsan warbaahinta INTERPOL ayaa sheegay in hay’adu aanay shaqo ku lahayn arrimaha noocan ah oo leh dabeecadda siyaasadeed.
Shabakadda “CNN” ayaa ka soo xigatay mas’uulka warbaahinta asaga oo yiri, “Sida ku xusan qodobka III ee dastuurka Interpol, wuxuu ururku si adag uga mamnuucayaa inuu farageliyo howlaha leh dabeecada siyaasadeed, militari, diin ama qowmiyadeed.”
“Sidaa darteed, markii loo soo diro mid ka mid ah codsiyadan Xoghaynta Guud, iyada oo la raacayo qodobbada dastuurka iyo qawaaniintayada, INTERPOL ma tixgelin doonto codsiyadaas,” ayuu raaciyay.
Marka laga hadlayo Wakiilka Gaarka ah ee Mareykanka ee Iran, Brian Hook, wuxuu u arkaayay amarka maxkamadeed ee xiritaanka Trump inuu yahay xeelad siyaasadeed si Iran looga dhigo doqon. Wuxuu yidhi, “Interpol ma faragalineyso ama ma soo saareyso waaran casaan ah oo ku saleysan arrimaha leh nooca siyaasadeed, kuwanuna waa mid leh dabeecad siyaasadeed.”
Kol hore ayaa Iran waxay soo saartay amar lagu soo xirayo Trump iyo 35 sarkaal oo Mareykan ah, waxayna Interpol ka codsatay inay gacan ka geysato fulinta xarigooda.
Xeer ilaaliyaha guud ee Iran wuxuu go’aansaday asal ahaan asagoo ku eedeynaya Trump iyo kuwa kale inay ka dambeeyeen duqeyn loo adeegsaday diyaarad Drone ah oo lagu dilay jeneraal sare oo reer Iiraan ah oo ku sugnaa caasimada Baqdaad.